Ama-Anime Ahamba Phambili ayi-10 ku-Hulu (2020) - Uhlu Lokubuka Okufanele Ulubheke - Ezokuzijabulisa
I-Anime ingenye yezinhlobo ezikhula kakhulu ezikhathini zamuva. Inikeza ukuncintisana okunzima emithonjeni yezindaba ejwayelekile. Ama-anime amaningi akhiqizwa evela eJapane, futhi ane-fanbase enkulu. Sezadlula izinsuku lapho i-anime yayibizwa ngokuthi “opopayi.”
Kulolu hlu, sizoxoxa nge-anime engcono kakhulu ongayenza bukela kuHulu kulo nyaka. Uhlu luqukethe i-anime ethile edumile efana neNaruto ne-Death Note namanye amagugu afihliwe afana no-Akira noJojo Bizzare Adventure, okufanele uzame.
Uthande Uchungechunge lwe-Anime? bese uhlola UKissAnime & Amawebhusayithi afanayo
Uchungechunge oluphezulu lwe-Anime oluzobukwa ku-Hulu:
1. IQhawe Lami Lezemfundo
Ngesilinganiso se-IMDb esingu-8.5, singenye ye-anime ehlonipheke kakhulu ozoyibuka. Cabanga nje ngesikole samaqhawe amakhulu? Cha, angikhulumi ngama-X-men. Kule anime, ngemuva kokuthi i-protagonist isindise isiqhwaga kumuntu omubi, umfundi ojwayelekile unikezwa amandla amakhulu amvumela ukuthi aye esikoleni sokuqeqesha esikoleni esiphakeme samaHeroes.
Zipholile kanjani lezi zinto? Ngaphandle kokunikezela ngabaphangi ngale ndaba, le anime ingenye yezidume kakhulu, futhi amathuba okuthi uyithande. Uma ubuka okungajwayelekile, nansi i-anime yakho. Futhi kunezinkathi ezine zokubuka nokuzijabulela.
2. I-Jojo Bizarre adventure
Isitayela sokugqwayiza sale anime singesinye sohlobo. Ngesilinganiso se-IMDb esingu-8.4, lena yi-anime okufanele uzitike ngayo. Isifinyezo simi kanje: izizukulwane eziningi zomndeni wakwaJostar, zonke ezinegama lesidlaliso elifanayo, zibhekana nezikhohlakali ezingaphezu kwamandla emvelo esikhathini sonke. Ngakho-ke lokhu akuyona enye yalezi zinto zokubuka zansuku zonke.
Kufanele ushaye ubuchopho bakho endabeni yezindaba. Uma ngabe ukuthandile ukuqhuma kweKamehameha nokuqhuma okuvela ku-Dragon Ball z, khona-ke kungenzeka ukuthi uyothanda le anime. Futhi, uzothola ukufana okuthile kumabhayisikobho e-mask. Inani lezinkathi zonyaka liyi-4.
3. ICowboy Bebop
Enye yama-anime amadala kakhulu kulolu hlu eqala ukuboniswa ngonyaka ka-2001. Isitayela sopopayi siyingxenye encane ngakho-ke kungenzeka singafani nentandokazi yakho. Kususelwa kuqembu labaseshi abaya ezenzakalweni zesikhathi esizayo kanye nokuzingela okuhle. Luhlobo lwesenzo / i-adventure oluyiqiniso ezimpandeni zalo zabaseshi.
Abalingiswa bangama-saas impela, futhi ngaphezulu, ungabheka iziqephu ngokunganaki ngaphandle kokukhathazeka ngodaba lwendaba. Njengoba inesizini eyodwa kuphela, uzoyiqeda ngokushesha uma lokho kungezinye zezinto ezikukhathazayo. Isilinganiso se-IMDb salesi anime ngu-8.9. Inani eliphelele lezinkathi 1.
4. Indoda Eyodwa Yesibhakela
Eminyakeni yamuva nje, ubungathola isitatimende esithi “100 push-ups, 100 squats, 100 sit-ups, bese kubaleka okungamakhilomitha ayi-10. Kwenze nsuku zonke! ”. Leli gama livela kule anime. Kukhishwe ngo-2015, i-anime yathola ukuthandwa okuningi. Njengoba igama liphakamisa, One-punch the protagonist, Saitama, can kill off any villain with just punch. Yilokho kuphela odinga ukukwazi.
Ubhekwa njengenye yamaqhawe anamandla kakhulu e-anime ohlwini lwama-tier. Kumnandi impela ukumbona ebulala ama-villan amakhulu ngesibhakela nje. I-anime nayo inamahlaya athile kuSaitama njengoba inempandla, ekhanyisa imvelo. Isilinganiso se-IMDb singu-8.8. Inani eliphelele lezinkathi eziqhubekayo liyi-2.
5. Ukuhlaselwa kweTitan
Le anime iphezu kweziqongo impela, inegazi, inyama, nazo zonke izinhlobo zezinto ongazicabanga. Ukuhlaselwa kweTitan kubizwa ngokuthi uhlobo lwe-anime lokuhamba okushonile ngesilinganiso se-IMDb esingu-8.8. Ngemuva kokubhujiswa komuzi wakubo ka-protagonist futhi kubulawa nomama wakhe, uthembisa ukuhlanza umhlaba ngama-titans amakhulu we-humanoid aqede sonke isintu.
Ukuhlaselwa kweTitan kuyidrama emsulwa futhi kukushaya kuyo yonke imizwa engenzeka. Ukuthuthukiswa komlingiswa kuhle impela, futhi wonke umuntu ulinde nje ukuthi kufike isizini yokugcina. Inani lezinkathi ezincane lilinganiselwa ku-4.
6. ITokyo Ghoul
Lokhu kubhekwa futhi njengenye ye-anime enomusa, futhi wonke umuntu kufanele ayibuke okungenani kanye ezimpilweni zabo. ETokyo kuhlaselwa izipoki ezifana nabantu kodwa zidla inyama yazo. Njengomuntu ohlangene, uKen Keneki uzithola ebanjwe phakathi kwamazwe amabili. Le yincazelo engenakho okonakala kakhulu ye-anime.
I-anime ihlanganyela zisuka nje futhi ikugcina unamathele ezihlalweni zakho. Azikho iziqephu zokugcwalisa ezenza i-anime ibe mfushane futhi ibe mnandi. Isilinganiso se-IMDb singu-7.9, futhi inani eliphelele lezinkathi liyi-1.
7. UNaruto Shippuden
I-anime ehamba phambili kulolu hlu. Ingcezu eyodwa, iDrag Ball, neNaruto zibizwa ngokuthi izisekelo ze-anime. UNaruto Shippuden ukulandela uchungechunge lweNaruto oluthandekayo. Uma kwenzeka ungazi, uNaruto uyi-ninja efuna ukuba yiHokage noma ngabe yini, futhi ekwenzeni lokho, kufanele adele izinto eziningi. UShippuden kulapho i-naruto ikhula khona futhi iqhubeka nohambo lwayo ngemuva kokubuya ekuqeqeshweni ngaphansi kukaJiraiya.
Uma uqala ngqo kusuka kuNaruto Shippuden, khona-ke khumbula ezinye izinto: I-Sasuke iyimbangi enkulu kunazo zonke kuNaruto naseSakura futhi ayinamsebenzi kakhulu kulo mbukiso. Yilokho kuphela; manje ungajabulela i-Naruto Shippuden. Le anime iqhubeke iminyaka eyishumi ngesilinganiso se-IMDb esingu-8.6. I-anime edume kakhulu. Ayikho isizini enjalo, kepha umbukiso uqukethe iziqephu ezingaphezu kuka-500. Ezinye zazo zigcwalisa, ngakho-ke qaphela uhlu lwendaba.
Uthanda ukugibela amabhayisikili kanye nesenzo esidonsa amathumbu? Yebo, nansi i-anime yakho. Ikhishwe ngonyaka we-1998, le anime imele ngokungacabangi ukuthi imele iTokyo. Isitayela sokugqwayiza sidala, futhi uzothola ukufana okuthile ku-Deadpool. Amazwibela alandelayo: iphrojekthi eyimfihlo yamasosha iba sengcupheni lapho iguqula ilungu leqembu lezigelekeqe libe yi-psychopath ye-physic enamandla.
Lokhu kungamiswa kuphela yintsha emibili neqembu lemilingo. Lolu akulona uhlobo lwe-anime wonke umuntu angaluthokozela, kepha kufanele uluhlole.
9. U-Ergo Proxy
Lokhu kwenzelwa bonke abalandeli abesabekayo laphaya. Le anime ingahlanganisa ngokuphelele uhlobo lwesenzo nokwesabekayo, okuvame ukungahambisani. Ingqikimba isethwe emhlabeni ngemuva kokubhujiswa lapho abantu nama-android behlala ngokuthula kuze kube yilapho umhloli uRe-I Mayer eqala ukuzingela isilo esaziwa njengo-Ergo Proxy.
Iqukethe iziqephu ezingama-23 kuphela, igcina i-anime imfishane. Isilinganiso se-IMDb sale anime singu-8.0 futhi sakhishwa ngonyaka ka-2006. Inani eliphelele lezinkathi liyi-1.
10. Inothi Lokufa
Lokhu kudingekile kuwo wonke umuntu. Le anime iseduze kakhulu neqiniso; konke ukunyakaza kwe-protagonist kuyahleleka futhi mhlawumbe yizinto ezifanayo obungazenza ukube ubusendaweni yakhe. Faka umhlaba we-Yugami Light; uthola i-Death Note ewile esibhakabhakeni lapho uma ebhala igama ngaphandle kokusho imbangela, umuntu uzobulawa yisifo senhliziyo kungakapheli imizuzwana engama-30.
URyuk ngusathane ozosiza uLight kanti uL ngumuntu ozama ukumvimba ekuhlanzeni umhlaba ngamacala enzondo. Izinguquko eziningi zenzekile eminyakeni edlule, okungenye yama-anime athandwa kakhulu. Zonke izinyathelo ukunyakaza okubaliwe ngokuKhanya. Le yi-anime encoma kakhulu yabantu abaqala ukubuka i-anime. Ngesilinganiso esiphakeme kakhulu se-IMD kulolu hlu, i-Death Note iyiphakamisa ngo-9.0. Inani eliphelele lezinkathi liyi-1.
Yebo, lokhu kuphetha uhlu lwethu lwe-Top Anime ozoyibuka ku-Hulu ngo-2020. Izintandokazi zethu kulolu hlu yi-Death Note, i-Naruto Shippuden, i-Tokyo Ghoul ne-One Punch Man. Siyethemba ukuthi uthole i-anime yokukuzingela ngokweqile kulolu hlu. Uma unezinye izengezo noma iziphakamiso, sicela usilahle ebhokisini lokuphawula.
bukela noma imaphi amavidiyo mahhala
ukubukela ama-movie wamahhala online mahhala ngaphandle kokulanda
uthole amakhadi wesipho samahhala akukho zinhlolovo
ungayisebenzisa kanjani i-camscanner ye-android
bukela imibukiso yamahhala ye-tv online reddit
ungayithola kanjani i-robux ipad yamahhala